လော်ရန်စီယမ် (အင်္ဂလိပ်: Lawrencium) သည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှု မရှိသော ဒုတိယ transferium element အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏အတည်ငြိမ်ဆုံး အခြေအနေဖြစ်သည့် isotope (၂၆၂) တွင် သက်တမ်းဝက်(half life) ၂၁၆ မိနစ်ဖြစ်သည်။ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအရ ၎င်း၏ atomic number, half-life နှင့် isotopes အရေအတွက် ပမာဏမှာ အနည်းအကျင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းဒြပ်စင်၏ အလေးချိန် (Atomic weight) ပြောင်းလည်းမှုများမှာ isotopes (၂၅၂) မှ (၂၆၂)အထိရှိပါသည်။၎င်း ဒြပ်စင်ကို ရှာဖွေရေးကိရိယာ Cyclotron (ဒြပ်စင်အသစ်များ ဖော်ထုတ်ရာတွင် အသုံးပြုသော ရှာဖွေရေးကိရိယာ) တည်ထွင်သူ ရူပဗေဒ ပညာရှင် Ernest O. Lawrence အား အစွဲပြု၍ Lawrencium ဟု အမည်ပေးခဲ့ပါသည်။
နိုဘယ်လီယမ် ← လော်ရန်စီယမ် → rutherfordium
Most stable isotopes of လော်ရန်စီယမ်
လော်ရန်စီယမ်(Lawrencium)သည် သဘာဝအရ မတွေ့ရှိရပါ။ unstable element ဖြစ်၍ ယို့ယွင်းပျက်စီးလွယ်ပြီး အခြား element များအဖြစ် လျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မတွေ့ရှိနိုင်ပါ။ ထိုကြောင့် လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လေ့လာရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
↑ Emsley, John (2011). Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements, New, New York, NY: Oxford University Press, 278–9. ISBN 978-0-19-960563-7။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လော်ရန်စီယမ်&oldid=506746" မှ ရယူရန်